ज्वाईमोह कारण अर्थमन्त्री खतिवडा विवादमा « Bikas Times
ज्वाईमोह कारण अर्थमन्त्री खतिवडा विवादमा
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान कोहिलाई के को धन्दा कोहि धन्दा घर ज्वाईलाई खानाको धन्दा भन्ने छ । नेपालका बर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भने हरेक पटक शक्तीमा पुगेका बेलामा ज्वाई मोह जाग्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको बेलामा पनि ज्वाईमोह देखाएका खतिवडाले अहिले पनि ज्वाई मोहको चरम रुप देखाउदै पदको दुरुपयोग गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक बिराटनगर कार्यालयका उपनिर्देशक श्री डा. रामशरण खरेल ओली सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाका छोरी ज्वाई हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रबैंकको गर्भनर भएका बेलामा ज्वाइ डा. खरेललाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष पठाएका थिए । त्यो बेलादेखि अति ज्वाइ मोहका कारण विबादमा पर्दै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए लगत्तै ज्वाइमोह पुनः दोहो¥याउदै राष्ट्रबैंकलाई पत्रचार गरेपनि फेरि विवादमा तानिएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछिको पहिलो काम नै ज्वाई मोहबाट सुरु गरेका छन् । गएको फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका डा. खतिवडाले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात फागुन १५ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै ज्वाई मोह देखाए । उनले सोही दिनदेखि हाजिर हुने गरी आफ्ना ज्वाइ डा. रामशरण खरेललाई मन्त्रालय पठाइ दिन पत्राचार गराएका हुन् । मन्त्रालयको तर्फबाट शाखा अधिकृत निरन्जन ज्ञवालीले राष्ट्रबैंकलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ‘नेपाल राष्ट्र बैंक बिराटनगर कार्यालयका उपनिर्देशक श्री डा. रामशरण खरेललाई आजैका मितिदेखि यस मन्त्रालयमा काम काज गर्ने गरी खटाई दिनुहुन आदेश अनुसार अनुरोध छ ।’
डा. खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको बेलामा उनका ज्वाइ डा. खरेललाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष पठाइएको थियो । सो अघिसम्म राष्ट्र बैंकबाट आइएमएफको सल्लाहकारमा कम्तिमा निर्देशक तहसम्मको अधिकारी पठाउने चलन भएपनि डा. खतिवडाले आफ्ना ज्वाइ डा. खरेललाई सो लाभको पदमा पठाएका थिए । डा. खरेल आइएमएफ जादा कनिष्ठ उपनिर्देशक थिए । राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक भनेको सेकेन्डक्लास अफिसर सरहको पद हो ।